Deg Deg Ciidamada milatariga itoobiya oo Talada Gobolka Gambellaha lawareegay. | ogaden24
Deg Deg Ciidamada milatariga itoobiya oo Talada Gobolka Gambellaha lawareegay.
Xogta Ka imaanaysa Gobolka Gambellaha ee galbeedka Itoobiya ayaa sheegaya dhibaatooyin cusub oo lasoo darsay qowmiyada Gambellaha.
Waxay Xogtu Intaasi xukuumada Itoobiya ayaa xukunka Gobolka Gambella gacanta ugalisay ciidanka Mulatariga taas oo kadhigan in xukun dag dag ah lagaliyay Gobolka Gambella.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan Gobolka Gambella ayaa dhankooda si cadho leh uga fal celiyay talaabadan ay qaaday xukuumada Abiye Axmed, waxayna ku tilmaameen isku day lagu dhibaatayn rabo shacabka oo awalba dhibaatooyin kaladuwan ladaalaa dhacayay.
Taliska guud ee ciidanka mulatariga Itoobiya ayaa talaabadan qaaday kadib dibad baxyo iyo qulqulatooyin bilahan kasocday Gobolka Gambella، wuxuuna talisku talaabadan kutilmaamay mid lagu xaqiijinayo amaanka Gobolka.
Gudiga Comond Post ga looyaqaano ee Itoobiya oo inata badan gobalada qalaalaasuhu kajiro maamula ayaa gobolka Gambellaha udaabulay ciidamo fadaraal ah, waxaana soobaxaya dareen xoogan oo shacabku ay kaqabaan ciidamadan ladul keenay.